Nin dhalinyaro ah oo toorey ku dilay Saado Saciid Xirsi iyo ninka oo gacanta lagu dhigay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nin dhalinyaro ah oo toorey ku dilay Saado Saciid Xirsi iyo ninka oo gacanta lagu dhigay
Nin dhalinyaro ah ayaa tooreey nafta uga qaaday gabar lagu magacaabo Saado Saciid Xirsi gudaha magaalada Boorama ee gobolka Awdal.
Allaha u naxariistee Saado Saciid Xirsi ayaa la sheegay inay ka mid ahayd dadka ku nool magaalada Boorama, gaar ahaan xaafada Dooxa ee dhinaca bari kaga taalo magaaladaasi, waxaana dilkeeda aad uga naxay dadka deegaanka oo iyada sida aadka ah u yaqiinay.
Ninka dilka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Khadar C/laahi Aadan, waxaana howgal culus kadib oo ay sameeyeen ciidamada maamulka Somaliland u suurto gashay in ninkaasi ay gacanta kusoo dhigaan islamarkaana ay xabsiga dhigaan.
Taliyaha ciidamada booliska gobolka Awdal ee maamulka Somaliland Bili Bili oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidanka Somaliland ay gacanta kusoo dhigeen gacan ku dhiiglihii dilka geystay islamarkaana sharciga lala tiigsan doono.
Ilaa iyo haatan lama sababta uu ninkaan dilka ugu geystay Allaha u naxariistee Saado Saciid Xirsi, taas oo sida la sheegay ka mid ahayd gabadhaha ku nool magaalada Boorama ee gobolka Awdal.